Kedu ka m si eji Yahoo maka backlinks?
Kachasị, ndị mmadụ na-eji sistemụ ọchụchọ ndị ọzọ dị ka Yahoo maka backlinks, mgbe ọ na-enweghị ụzọ ọzọ ị ga-esi nyefee weebụsaịtị ma ọ bụ blog ha na ndị isi dị ka Google n'onwe ya. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga-egosi gị otu esi eji Yahoo maka backlinks. Tinye ya, anyị ga-enweta azịza Yahoo nke ga-ewetara gị azụmazụ ndị a bara uru na nloghachi. Ma, rịba ama na ihe ahụ bụ iji mee ka azịza ndị ahụ dị ka o kwere mee, iji jide n'aka na a gaghị amata ha dị ka spam. E nwekwara ụzọ ndị ọzọ eji Yahoo maka backlinks - n'okpuru ebe m ga-egosi gị ndepụta zuru ezu na-ekpuchi nhọrọ niile ị ga-eji mezue ọrụ ahụ - nembutal powder hypnosis. Nke a bụ isi ihe ị ga - eburu n'uche, nke mbụ:
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, naanị ị nwere ike iji Ntuziaka Webmaster nke Bing nyefee weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị na Yahoo.Buru n'uche na Bing bu Bing ugbu a. Ya mere, ị ga-ibugharị ya na Bingbox webmaster toolbox iji mezue usoro nrubeisi gị.
Ka o sina dị, ị nwere ike ịnwa ịnyefe saịtị weebụ gị ma ọ bụ blog URLs ozugbo na nchọnchọ Bing. N'ịme nke a, ọ gaghị adị mkpa iji oge gị na-anwa ime ihe ejizi Ngwaọrụ Webmaster Bing.
Ị nwere ike itinye maka ụfọdụ mkparịta ụka metụtara ụlọ ọrụ ma ọ bụ niche iji mezie akụkụ nke njikọ ụlọ njikọ gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji Yahoo maka backlinks, ihe niile ị chọrọ bụ ịkwunye posts ndị kachasị na ozi Yahoo Answers. N'ụzọ dị otú ahụ, ọ bụghị nanị na ị ga-enweta njikọ bara uru na nkwụghachi kama ịnweta okporo ụzọ ndị ọzọ.
I nwekwara ike ịga chọọ ajụjụ a na-ajụkarị na Yahoo Answers (a. k. a. Ajụjụ) iji ghọta mkpụrụ na ihe nkedo - ma wepụta ụfọdụ ihe ndị ọzọ metụtara njikọ ahụ na-ewu ewu nke ugbu a mmasị gị na-ege ntị ma ọ bụ ahịa niche.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịmatakwu n'ime okwu ahụ. Gbalịa iche echiche banyere okwu ọ bụla na ọnụ ọgụgụ - M na-eche na ị nwere ike iwepụ ya ngwa ngwa, na-aza ya n'ụzọ kachasị mma, na na-enweghị mkpa ịnye njikọ maka nzaghachi ọ bụla bara uru nke nke gị. N'ezie, ọ ga-ewe oge buru ibu, n'eziokwu n'emeghị ọtụtụ ihe a pụrụ ịhụ na ozugbo. Ka o sina dị, a na-atụ aro ka ị rụọ ọrụ nke ọma n'ịkpụpụta aha dị ike ma tụkwasị obi maka ụlọ ọrụ azụmahịa gị ma ọ bụ blog. Na ụzọ ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-agagharị nwayọọ nwayọọ na isi ihe mgbaru ọsọ nke ịmepụta ike backlink profaịlụ - na ị dị mma!
Na-arụ ọrụ nanị maka azịza zuru ezu zuru ezu na Yahoo maka backlinks - nke a bụ ihe ị kwesịrị icheta. Ee, ọ ga ewe oge buru ibu, ya mere, ị ga-adị mma iji nzaghachi ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, zere iwepụta azịza dị nkenke ma ọ bụ dị mfe - ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ha dị ka spam. N'ikpeazụ, nke a bụ ihe ị kwesịrị icheta - ka ndị mmadụ na-amụ banyere ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog na azịza Yahoo (ọ bụrụgodị na enweghị njikọ dị mgbe post gị) - ihe ka mma ga-abịa. Isi ihe dị ebe a bụ iji kwụọ ụgwọ oge gị, ma emeela gị!